Le nkampani isungule imigqa yayo yokukhiqiza igilavu ​​e (Suqian, Jiangsu). Sikhiqiza futhi sithengise amagilavu ​​we-nitrile wokuhlola alahlwayo (i-powder-free) amagilavu ​​okuhlola i-nitrile. Isiqubulo senkampani yethu ukugxila ekwenzeni okulungile. Sinamandla wokukhiqiza aqinile nentengo yokuncintisana. Ngakho-ke singaqinisekisa ukulethwa ngesikhathi sama-oda amakhasimende. Sinamathela enjongweni yebhizinisi ye- "Ikhwalithi yimpilo; ngokungapheli qhubeka nokwenza ngcono insizakalo njengesiqinisekiso; ikhasimende kuqala ngokuwina-win". Senza konke okusemandleni ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni lokuqala kanye nensizakalo esezingeni lokuqala. Siqukethe izinhloso zethu ekujabuleleni ingubo yakho, sijabulela ukuphakama kwakho. Inkampani yethu inamagatsha eCanada naseShenzhen, eChina. Siphinde futhi simelele omaskhi abaningi bamaShayina, izingubo zokuzihlukanisa, izingubo zokusebenza, imishini yomoya-mpilo, imigomo.
Ifektri yenkampani yethu inemishini esezingeni eliphezulu kanye nabasebenzi abaningi abanomthwalo wemfanelo, ngakho-ke sinomkhiqizo oqinile namanani okuncintisana, okulandelayo ezinye izithombe eziboniswayo
Amagilavu ​​ethu asetshenziswe emazweni angaphezu kwayishumi: iYurophu: i-Italy, iJalimane, iFrance, iLithuania, iSwitzerland, iSweden, njll. I-Asia: Japan, Malaysia, njll;
I-Oceania: i-Australia; iMelika: iMelika, iBrazil, njll i-Afrika: INingizimu Afrika, iMalawi, njll. Okulandelayo kungumbukiso wabanye babalingani bethu.
Q Kungani kufanele uthenge kithi hhayi kwabanye abahlinzeki?
A Izinto zethu ezifanelekile, imikhiqizo efanelekayo, amanani ancintisanayo nolayini bokukhiqiza abangochwepheshe.
Q Ayini amagama akho okuhweba?
I-EXW, i-FOB, i-CFR, i-CIF yimigomo yethu ejwayelekile yokuhweba. Uma kunesidingo, ungasebenzisa i-DDP noma i-DDU.
Q Ungayamukela i-OEM?
Ifektri yethu ingamukela i-OEM, sicela usinike imininingwane ye-oda lakho. Umnyango wethu wokukhiqiza uzothuthukisa futhi ukhiqize ngokuya ngezidingo zethu ezikhethekile.
Q Ingabe uzihlola zonke izimpahla ngaphambi kokulethwa?
Yebo, sinenqubo eqinile yokuhlola ngaphambi kokuthunyelwa. Sihlola ukubukeka, isimo somzimba kanye nokusebenza kwempahla. Zonke izimpahla kumele zikudlulise konke ukuhlolwa ngaphambi kokuthi zithunyelwe emakethe.
Q Ungakwazi yini ukukhiqiza kusuka kumasampula?
Yebo, singenza ngokwezifiso imikhiqizo yethu ngokuya ngamasampuli akho noma ezinye izidingo ezikhethekile.
Q Iyini inqubomgomo yesampula?
A Singanikeza ngamasampula athile asesitokweni. Kodwa-ke, abathengi kufanele bakhokhe izindleko zokuthumela kanye nentela.
Q Ziyini izikhathi zokulethwa?
Ngokuvamile, izinsuku ezingu-7-10 ngemuva kokukhokha. Isikhathi esiqondile sokulethwa sincike ezintweni naseziningi ozi-odayo.
Q Ziyini izimo zokupakisha?
Ngokuvamile, sifaka imikhiqizo yethu ngamabhokisi anemibala namabhokisi anegama lethu lomkhiqizo. Uma une-patent ebhaliswe ngokusemthethweni, singayifaka ebhokisini lemibala lapho kutholwa incwadi yakho yokugunyazwa.
I-Jiangsu Jinlian Medical Technology Co, Ltd. Sikhiqiza futhi sithengise amagilavu ​​we-nitrile wokuhlola alahlwayo (akukho powder) amagilavu ​​okuhlola i-nitrile. Sinamandla wokukhiqiza aqinile nezintengo zokuncintisana, ngakho-ke siqinisekisa ukulethwa kwesikhathi.